တချိန်က အပြာမင်းသမီး၊ အခု ထိပ်တန်း မင်းသမီးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ - APANNPYAY
Home / နိုင်​ငံတကာသတင်း / တချိန်က အပြာမင်းသမီး၊ အခု ထိပ်တန်း မင်းသမီးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
တချိန်က အပြာမင်းသမီး၊ အခု ထိပ်တန်း မင်းသမီးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
Apann Pyay 9:01 AM နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
ရုပ်ရှင်လောကမှာ အချို့သော သရုပ်ဆောင်များဟာ သူတို့ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်လေ့ မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးများသာ ကြည့်ခွင့်ပြုတဲ့ လိင်အသား ပေးရုပ်ရှင်ကား သရုပ်ဆောင်ဘ၀ကနေပြီး ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့ Sunny Leone ဆန်နီလီယွန်ကတော့ သူမရဲ့အတိတ်က ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရာမှာ စနောင့်စနင်း မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ ဒီကနေ့ အများပရိသတ်က သူမကို သိနေတာဟာလည်း အတိတ်က သူမရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ပါလို့ ၀န်ခံတယ်။
”ဒီကနေ့ ကျွန်မ ဒီအဆင့်ရောက်နေရတာဟာလည်း ကျွန်မရဲ့အတိတ်က လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ဖုံးကွယ်ထားရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မယုံကြည်ခဲ့ဘူး။ ရှက်လည်း မရှက်ပါဘူး။ အင်တာနက်ထဲမှာ လက်ညှိုးထိုးမလွဲ မြင်နေရတဲ့ ကျွန်မ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ကျွန်မ ဖျက်မပစ်ပါဘူး”လို့ အသက် ၃၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဆန်နီလီယွန်က ပြောခဲ့တယ်။ ‘ဒါကြောင့် ဆန်နီလီယွန်ဟာ ဘယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရဲရဲတင်းတင်း မရှက်မကြောက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သလို နောင်လည်း ကျရာအခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ဒီလိုပဲ သရုပ်ဆောင်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အတိတ်က သူမရဲ့ ရုပ်ရှင်သက်တမ်းမှာ အမှားတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီအမှားတွေအတွက် ၀မ်းနည်းပြီး နောင်တရတာတွေ မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်။ တချိန်ထဲမှာ မစ္စလီယွန်ဟာ ဂူဂျာရတ် ပြည်နယ်၊ ဆူရတ်မြို့ကို သွားခဲ့တုန်းက ရဲစခန်းတခုမှာ သူမကို တိုင်ချက်ဖွင့်ခံခဲ့ရတာနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ ဒီလိုပါ။ မစ္စဆန်နီလီယွန်ဟာ ဆူရတ်မြို့ကို သူမရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ဖို့ သွားရောက်ခဲ့တုန်းက ဆူရတ်အခြေစိုက် စိန်ကုန်သည်ကြီးတဦးရဲ့ ဧည့်ခံပွဲမှာ ဆန်နီလီယွန်ဟာ အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်းပြီး တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံလူတယောက်က မစ္စဆန်နီလီယွန်ကို ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆန်နီလီယွန်က ဒီသတင်းကို မမှန်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမအနေနဲ့ ဘာမှ အကြောင်းကြားစာ မရခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ သူမအနေနဲ့ ဘာအမှားမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှ မချိုးဖောက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီဒေသက လူတွေကို အမြဲတမ်း လေးစား ဂါရ၀ပြုနေကြောင်း ပြန်ပြီး ရှင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ Ek Paheli Leela ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပထမဦးဆုံး တင်ပြလိုပါတယ်။
သူမဟာ ဘောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကမှာ မျက်နှာသစ်တယောက်အနေနဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အစွမ်းပြနိုင်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန်နီလီယွန်ဆိုတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီးဟာ အရင်က ပေါ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနာမည်ကျော် မင်းသမီးတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းထက် မနိမ့်ကျတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးသမားတွေက သူမနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူမရဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက် လို့ပဲဖြစ်စေ ဘယ်လိုပဲဝေဖန်နေကြပါစေ။ ဆန်နီလီယွန်ကတော့‘ဒီကနေ့ စူပါစတားဆိုတဲ့ မင်းသမီးတွေအဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဆန်နီလီယွန်ရဲ့ အရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်ရင် လတ်တလော ပြသနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဘော်ဘီခန် ရိုက်ကူးတဲ့ Ek Paheli Leela ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို သွားရောက် ကြည့်ရှုပြီး အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်လိုက်ရင် ပရိသတ်ရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ထိုးဖောက်နိုင်လောက်အောင် စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ အချက် ငါးချက်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ . . .
၁။ အသစ်ချပ်ချွတ် ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီးရဲ့ နာမည်က ဆန်နီလီယွန်ဆိုတာပါပဲ။ နာမည်က အိန္ဒိယမဆန်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ဆန်တဲ့နာမည်ပါ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကလည်း မျက်စိထဲက မထွက်နိုင်အောင် စွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို အသံကလည်း အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံမျိုးထက် နိုင်ငံခြားလေသံ ပေါက်နေတာကို ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပဲ ပြောပြော၊ အင်္ဂလိပ် လိုပဲပြောပြော ဆန်နီလီယွန်ရဲ့အသံက နိုင်ငံခြားသူ လေသံပေါက်နေတာ ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒုတိယအချက်ကတော့ ဘောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါလေ့ရှိတဲ့ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်း (တခါတရံ အပြာဇာတ်လမ်းခန်း)တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါပဲ။ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ဒီကနေ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေမှာ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း (အနောက်တိုင်း ပုံစံအတိုင်း) ရိုက်ကူးပြသလာတာ တွေ့ရတယ်။ အရင်တခေတ်တုန်းက နာမည်ကျော် ‘ကွေဘာနီ’ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီး ဇီနတ်အာမန်ကနေပြီး ဒီကနေ့ခေတ် ဘောလီးဝုဒ်မင်းသမီး ဘီပါရှာဘာဆူ (Bipasha Basu) အထိ အိန္ဒိယမင်းသမီး တော်တော်များများဟာ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း သရုပ်ဆောင်ကြတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီမင်းသမီးတွေ တော်တော်များများကလည်း အိန္ဒိယရုပ်ရှင်လောကမှာ ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ အခု ဇာတ်ကားမှာလည်း ဆန်နီလီယွန်ဟာ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေမှာ အထက်ဖော်ပြပါ မင်းသမီးတွေကို အမီလိုက်နိုင်ရုံမကဘူး ကျော်တက်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၃။ တတိယအချက်ကတော့ သူမရဲ့ ကာရိုက်တာလို့ခေါ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စရိုက်ပါပဲ။ ဆန်နီလီယွန်ကို စွဲမက်စရာ ကောင်းတဲ့ မြို့ ကြီးသူ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ ပရိသတ်က တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အခု Ek Paheli ဇာတ်ကားမှာတော့ တမျိုးကွဲပြား ခြားနားပြီး ကျေးလက်တောသူ လှပျိုဖြူတဦးအနေနဲ့ တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်တောသူ လှပျိုဖြူရဲ့ စွဲမက်စရာ သီချင်းညည်းသံကိုလည်း သာယာနာပျော်စရာ ကြားကြရပါလိမ့်မယ်။
၄။ စတုတ္ထအချက်ကတော့ အက အခန်းတွေပါပဲ။ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေမှာ ကခုန်ရွှင်မြူးကြတဲ့အခန်းတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပါရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဆန်နီလီယွန်ဟာ နာမည်ကျော် မင်းသမီး အက်ရ်ှဝါရာရိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် Dholi Tauro သီချင်းနဲ့ အကပုံစံတွေကို အတုယူပြီး သီဆိုကခုန်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
၅။ ပဉ္စမအချက်ကတော့ ဆန်နီလီယွန်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်နီလီယွန်ကို Shootout at wadala ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ လိုင်လာဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆောင်တဦးအဖြစ် တွေ့ခဲ့ရသလို Ragini MMS2ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ဘေဘီဒေါအနေနဲ့ တွေ့မြင် ခဲ့ကြပါတယ်။ အခု ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ဆန်နီလီယွန်ကို Leela ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးအနေနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ တွေ့ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဆန်နီလီယွန်နဲ့ အကကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်း ၈ ပုဒ်အနက် ၆ ပုဒ်ကို ဆန်နီလီယွန်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ အက၊ အလှတွေနဲ့ တ၀ကြီးကြည့်ရှု ခံစားနိုင်တဲ့ Ek Paheli Leela ဇာတ်ကားကြည့်ပြီး ပရိသတ်စိတ်ကျေနပ်လောက်မယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ရုပျရှငျလောကမှာ အခြို့သော သရုပျဆောငျမြားဟာ သူတို့ရဲ့ အတိတျဘဝဇာတျကွောငျးတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ထုတျဖျောလေ့ မရှိကွပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လူကွီးမြားသာ ကွညျ့ခှငျ့ပွုတဲ့ လိငျအသား ပေးရုပျရှငျကား သရုပျဆောငျဘဝကနပွေီး ဘောလီးဝုဒျမငျးသမီးဖွဈလာတဲ့ Sunny Leone ဆနျနီလီယှနျကတော့ သူမရဲ့အတိတျက ဇာတျကွောငျးနဲ့ပတျသကျလို့ဆှေးနှေးရာမှာ စနောငျ့စနငျး မဖွဈခဲ့ဘူး။ တကယျတော့ ဒီကနေ့ အမြားပရိသတျက သူမကို သိနတောဟာလညျး အတိတျက သူမရဲ့ဖွဈရပျတှကွေောငျ့ပါလို့ ဝနျခံတယျ။
”ဒီကနေ့ ကြှနျမ ဒီအဆငျ့ရောကျနရေတာဟာလညျး ကြှနျမရဲ့အတိတျက လုပျရပျတှကွေောငျ့ပါ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမ ဖုံးကှယျထားရမယျလို့ ဘယျတုနျးကမှ မယုံကွညျခဲ့ဘူး။ ရှကျလညျး မရှကျပါဘူး။ အငျတာနကျထဲမှာ လကျညှိုးထိုးမလှဲ မွငျနရေတဲ့ ကြှနျမ ပုံရိပျတှကေိုလညျး ကြှနျမ ဖကျြမပဈပါဘူး”လို့ အသကျ ၃၃ နှဈ ရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆနျနီလီယှနျက ပွောခဲ့တယျ။ ‘ဒါကွောငျ့ ဆနျနီလီယှနျဟာ ဘယျရုပျရှငျဗီဒီယိုဇာတျကားမှာပဲဖွဈဖွဈ ရဲရဲတငျးတငျး မရှကျမကွောကျ သရုပျဆောငျခဲ့သလို နောငျလညျး ကရြာအခနျးကဏ်ဍတှမှော ဒီလိုပဲ သရုပျဆောငျဦးမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဘာပဲပွောပွော အတိတျက သူမရဲ့ ရုပျရှငျသကျတမျးမှာ အမှားတှေ လုပျခဲ့ပမေယျ့ ဒီအမှားတှအေတှကျ ဝမျးနညျးပွီး နောငျတရတာတှေ မရှိဘူးလို့ ပွောတယျ။ တခြိနျထဲမှာ မစ်စလီယှနျဟာ ဂူဂြာရတျ ပွညျနယျ၊ ဆူရတျမွို့ကို သှားခဲ့တုနျးက ရဲစခနျးတခုမှာ သူမကို တိုငျခကျြဖှငျ့ခံခဲ့ရတာနဲ့လညျး ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ ပွဿနာကတော့ ဒီလိုပါ။ မစ်စဆနျနီလီယှနျဟာ ဆူရတျမွို့ကို သူမရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈ ပရိုမိုးရှငျးလုပျဖို့ သှားရောကျခဲ့တုနျးက ဆူရတျအခွစေိုကျ စိနျကုနျသညျကွီးတဦးရဲ့ ဧညျ့ခံပှဲမှာ ဆနျနီလီယှနျဟာ အပျေါပိုငျး ဗလာကငျြးပွီး တကျရောကျခဲ့တဲ့ ဓာတျပုံတှေ ပျေါထှကျလာခဲ့တဲ့အတှကျ ဒသေခံလူတယောကျက မစ်စဆနျနီလီယှနျကို ရဲစခနျးမှာ တိုငျခကျြဖှငျ့ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဆနျနီလီယှနျက ဒီသတငျးကို မမှနျကွောငျး ငွငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သူမအနနေဲ့ ဘာမှ အကွောငျးကွားစာ မရခဲ့တဲ့အကွောငျး၊ သူမအနနေဲ့ ဘာအမှားမှ မလုပျခဲ့တဲ့အကွောငျး နိုငျငံရဲ့ ဥပဒစေညျးမဉျြးတှကေိုလညျး ဘယျတုနျးကမှ မခြိုးဖောကျခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကွောငျး ဒီဒသေက လူတှကေို အမွဲတမျး လေးစား ဂါရဝပွုနကွေောငျး ပွနျပွီး ရှငျးခကျြထုတျခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ Ek Paheli Leela ဇာတျကားနဲ့ပတျသကျလို့ ပထမဦးဆုံး တငျပွလိုပါတယျ။
သူမဟာ ဘောလီးဝုဒျ ရုပျရှငျလောကမှာ မကျြနှာသဈတယောကျအနနေဲ့ လြှမျးလြှမျးတောကျ အစှမျးပွနိုငျတဲ့ သူတယောကျ ဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆနျနီလီယှနျဆိုတဲ့ ဘောလီးဝုဒျမငျးသမီးဟာ အရငျက ပျေါခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယနာမညျကြျော မငျးသမီးတှရေဲ့ အဆငျ့အတနျးထကျ မနိမျ့ကတြာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဝဖေနျရေးသမားတှကေ သူမနဲ့ ပတျသကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ သူမရဲ့ ဇာတျကားနဲ့ပတျသကျ လို့ပဲဖွဈစေ ဘယျလိုပဲဝဖေနျနကွေပါစေ။ ဆနျနီလီယှနျကတော့‘ဒီကနေ့ စူပါစတားဆိုတဲ့ မငျးသမီးတှအေဆငျ့ကို ရောကျနပေါပွီ။ ဆနျနီလီယှနျရဲ့ အရညျအခငျြး ဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာ သိခငျြရငျ လတျတလော ပွသနတေဲ့ ဒါရိုကျတာ ဘျောဘီခနျ ရိုကျကူးတဲ့ Ek Paheli Leela ဆိုတဲ့ ဇာတျကားကို သှားရောကျ ကွညျ့ရှုပွီး အကဲဖွတျနိုငျပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကို ကွညျ့လိုကျရငျ ပရိသတျရဲ့ အသညျးနှလုံးကို ထိုးဖောကျနိုငျလောကျအောငျ စှဲမကျစရာကောငျးတဲ့ အခကျြ ငါးခကျြကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ . . .
၁။ အသဈခပျြခြှတျ ဘောလီးဝုဒျမငျးသမီးရဲ့ နာမညျက ဆနျနီလီယှနျဆိုတာပါပဲ။ နာမညျက အိန်ဒိယမဆနျဘဲ အင်ျဂလိပျဆနျတဲ့နာမညျပါ သူမရဲ့ ရုပျရညျကလညျး မကျြစိထဲက မထှကျနျိုငျအောငျ စှဲမကျစရာ ကောငျးတဲ့အလှကို ပိုငျဆိုငျထားသလို အသံကလညျး အိန်ဒိယအမြိုးသမီးတှရေဲ့ အသံမြိုးထကျ နိုငျငံခွားလသေံ ပေါကျနတောကို ကွားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဟိန်ဒူဘာသာနဲ့ပဲ ပွောပွော၊ အင်ျဂလိပျ လိုပဲပွောပွော ဆနျနီလီယှနျရဲ့အသံက နိုငျငံခွားသူ လသေံပေါကျနတော ကွားရမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ ဒုတိယအခကျြကတော့ ဘောလီးဝုဒျရုပျရှငျကားတှမှော ပါလရှေိ့တဲ့ ခဈြခနျးကွိုကျခနျး (တခါတရံ အပွာဇာတျလမျးခနျး)တှနေဲ့ ပတျသကျလို့ပါပဲ။ အားလုံး သိကွတဲ့အတိုငျး ဒီကနေ့ အိန်ဒိယရုပျရှငျ ဇာတျကားတှမှော ခဈြခနျးကွိုကျခနျးတှေ ခပျကွမျးကွမျး (အနောကျတိုငျး ပုံစံအတိုငျး) ရိုကျကူးပွသလာတာ တှရေ့တယျ။ အရငျတခတျေတုနျးက နာမညျကြျော ‘ကှဘောနီ’ဇာတျကားထဲက မငျးသမီး ဇီနတျအာမနျကနပွေီး ဒီကနခေ့တျေ ဘောလီးဝုဒျမငျးသမီး ဘီပါရှာဘာဆူ (Bipasha Basu) အထိ အိန်ဒိယမငျးသမီး တျောတျောမြားမြားဟာ ခဈြခနျးကွိုကျခနျးတှမှော ခပျကွမျးကွမျး သရုပျဆောငျကွတာ တှရေ့မှာပါ။ ဒီမငျးသမီးတှေ တျောတျောမြားမြားကလညျး အိန်ဒိယရုပျရှငျလောကမှာ ထိပျတနျးရောကျခဲ့တာကို တှရေ့ ပါတယျ။ အခု ဇာတျကားမှာလညျး ဆနျနီလီယှနျဟာ ခဈြခနျးကွိုကျခနျးတှမှော အထကျဖျောပွပါ မငျးသမီးတှကေို အမီလိုကျနိုငျရုံမကဘူး ကြျောတကျသှားနိုငျတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
၃။ တတိယအခကျြကတော့ သူမရဲ့ ကာရိုကျတာလို့ချေါတဲ့ သရုပျဆောငျစရိုကျပါပဲ။ ဆနျနီလီယှနျကို စှဲမကျစရာ ကောငျးတဲ့ မွို့ ကွီးသူ အမြိုးသမီးတယောကျရဲ့ ပုံသဏ်ဌာနျနဲ့ ပရိသတျက တှမွေ့ငျခဲ့ကွပွီးပါပွီ။ အခု Ek Paheli ဇာတျကားမှာတော့ တမြိုးကှဲပွား ခွားနားပွီး ကြေးလကျတောသူ လှပြိုဖွူတဦးအနနေဲ့ တှမွေ့ငျကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြေးလကျတောသူ လှပြိုဖွူရဲ့ စှဲမကျစရာ သီခငျြးညညျးသံကိုလညျး သာယာနာပြျောစရာ ကွားကွရပါလိမျ့မယျ။
၄။ စတုတ်ထအခကျြကတော့ အက အခနျးတှပေါပဲ။ အိန်ဒိယရုပျရှငျတှမှော ကခုနျရှငျမွူးကွတဲ့အခနျးတှကေတော့ ထုံးစံအတိုငျးပါရစမွဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ ဆနျနီလီယှနျဟာ နာမညျကြျော မငျးသမီး အကျရျှဝါရာရိုငျးရဲ့ နာမညျကြျော Dholi Tauro သီခငျြးနဲ့ အကပုံစံတှကေို အတုယူပွီး သီဆိုကခုနျထားတာ တှရေ့တယျ။
၅။ ပဉ်စမအခကျြကတော့ ဆနျနီလီယှနျရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဆနျနီလီယှနျကို Shootout at wadala ဆိုတဲ့ ဇာတျကားမှာ လိုငျလာဆိုတဲ့ ဇာတျဆောငျတဦးအဖွဈ တှခေဲ့ရသလို Ragini MMS2ဆိုတဲ့ ဇာတျကားမှာ ဘဘေီဒေါအနနေဲ့ တှမွေ့ငျ ခဲ့ကွပါတယျ။ အခု ဒီဇာတျကားမှာတော့ ဆနျနီလီယှနျကို Leela ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးအနနေဲ့ တမူထူးခွားတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှေ တှရေ့ဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ ဆနျနီလီယှနျနဲ့ အကကြှမျးကငျြမှုတှကေိုလညျး တှရေ့မှာပါ။ ဒီဇာတျကားရဲ့ ဇာတျဝငျသီခငျြး ၈ ပုဒျအနကျ ၆ ပုဒျကို ဆနျနီလီယှနျရဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့ တငျပွထားပါတယျ။ အက၊ အလှတှနေဲ့ တဝကွီးကွညျ့ရှု ခံစားနိုငျတဲ့ Ek Paheli Leela ဇာတျကားကွညျ့ပွီး ပရိသတျစိတျကနြေပျလောကျမယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။